apple & apos; s airpods pro yakarova iyo nyowani-yenguva yakaderera mutengo mune yakapenga (yakagadziridzwa) dhiri
Kuru Nhau & Ongororo Apple & apos; s AirPods Pro yakarova itsva-yenguva-yakaderera mutengo mune yakapenga (yakagadziridzwa) dhiri
Inogara ichitengwa pamutengo unokwanisika $ 249 (kunyanya tichifunga nezvezera ravo repamberi), iwo ari kutengesa-epamusoro-magumo echokwadi asina waya mahedhifoni munyika akawana zvibodzwa zvakati wandei mumwedzi ichangopfuura mune ese ari maviri matsva uye akagadziridzwa mamiriro.
Zvinonzwisisika zvakakwana, maAmazon & apos; epamusoro AirPods Pro chibvumirano paPrime Day 2021 Vhiki rapfuura raive kure risingadzivisike, kunyangwe Woot akakurumidza kuyedza kugadzirisa izvozvo na kuchaja zviyero $ 170.99 yeiyo nyowani, isina kushandiswa, isina kuvhurwa, uye isina kugadzikana vaviri vevakomana vakaipa vane yakazara-gore-rewarandi inosanganisirwa.
Zvisingashamisi, iro rakapenga rinotaridzika dhiri haruna & apos; harigare kwenguva refu, asi izvo & apos; s uko Walmart inopinda izvozvi, ichikubvumidza iwe kubhadhara zvakatoperera ... zveakagadziridzwa AirPods Pro mayuniti. Zvakanyanya kushomeka, ziva iwe, uye pachokwadi, ichi chingave chiri chikuru chibvumirano chakambopihwa nemutengesi mukuru weUS akadaro.
Yechokwadi Wireless Earbuds ine Active Noise Kanzura, Yakagadziridzwa
$ 114 yabviswa (46%)$ 135 $ 249Tenga kuWalmart
Nehunyanzvi, zvakadaro, wechitatu-bato mutengesi anonzi VIPOutlet ndiye ari kunyatso tarisa zvese zviri zviviri kutengesa uye kutumira pano kwete Walmart, asi rekodhi rekodhi yacho yakasimba kwazvo. Mamiriro ezvinhu ewarandi zvakare haana kujeka, kunyangwe kana kumwe kukwidziridzwa kwakapfuura kwerudzi urwu kuri chiratidzo, unofanirwa kuvharwa kwemazuva makumi mapfumbamwe nekukanganisa kukuru uye nehurema.
Kunze kwezvo, mutemo wekudzoka unotaura zvakajeka kuti iwe unogona kudzosera mari yako mukati memazuva makumi matatu ekutengesa & maapuro; kana iwe & apos usiri kufara nemaitiro ako ekugadzirisa kana anotaridzika.
Saka nekudaro, iwe & apos; hausi kunyatsoisa njodzi kana ukasarudza kubhadhara chete $ 135 yeimwe yeiyo akanakisa echokwadi asina waya nzeve anowanikwa muna 2021 . Ehe, iyo AirPods 3 inogona kuuya munguva pfupi , asi chimwe chinhu chinotiudza Apple & apos; s inotevera-gen isiri-Pro modhi haizokwanise kugogodza iyo AirPods Pro kunze kwanhasi & apos; s runyorwa rwe makuru asina waya mahedhiyo ane anoshanda ruzha kukanzurwa .
t nhare wifi yekufona kuongorora
Mbavha dzinogona kudzima Tsvaga yangu iPhone uye dzima yako iCloud account nekuda kwekuchengetedza glitch muIOS 7
Samsung & apos; s Galaxy S20 Ultra skrini yekutsiva mitengo yabuda, uye Best Buy haisi yekugadzirisa sarudzo